ShweMinThar: ဟင်းချက်နည်းအစုံအလင် သူတကာတွေတင်
သူများတွေဟင်းချက်ကောင်းရင်ကိုယ်မချက်တတ်ပေမဲ့ သွားရေတွေကျပြီး လိုက်ချက်တတ်ပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော် မချက်ဖြစ်တာကြာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကိုယ်တိုင်ချက်စားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကူးယူဖော်ပြနေတဲ့ဟင်းချက်နည်းလေးတွေက အထောက်အကူဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အသားကို ချဉ်စော်ခါးသီးနဲ့ချက်တာကတရုတ်လူမျိုးတွေချက်တာမြင်ဖူးပါတယ်။ အအီများတဲ့အသားတောင် စားလို့ကောင်းသွားသလို ချဉ်စော်ခါးသီးလည်းအရသာအတစ်မျိုးနဲ့စားကောင်းသွားပါရဲ့။၀က်ဂုတ်သားကင်ကတော့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်သွားရင် ကျွန်တော်စားနေကျအရာပါ စားလို့အတော်ကောင်းပါတယ်။သီးရွက်စုံဟင်းရည်ကတော့ တခြားဟင်းအမယ်တွေမချက်လိုဘဲ ထမင်းဖြူလေးနဲ့တွဲဖက်စားတာနဲ့တင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်။
ကြက်ခြေထောက်အရေခွံသုပ်တာကျတော့ဘီယာလေးနဲ့မြည်းတကယ်ကောင်းပေါ့။ ၀က်ခြေထောက်စွပ်ပြုပ်တို့ ၀က်သားချဉ်တို့ကတော့ စားပြီးရင်းထပ်စားချင်ဆိုတော့ကာအဆီချနေသူများအတွက် ရှောင်ရမယ့်ဟင်းတွေပေါ့။ ကဲပါ ထမင်းမြိန်နိုင်ကြပါစေနော်..။
ချဉ်စော်ခါးသီးစိမ်း...........................၁ လုံး( အခွံခွါ၊ အူတိုင်၊အစေ့ထုတ်)
ကြက်သားတွေကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးစစ်ကာ ဆား၊ ပာင်းခတ်မှုန်.၊နနွင်းမှုန်.၊ အရောင်တင်မှုန်.၊ ချင်း+ ကြက်သွန်ဖြူရောထောင်းတာတို.နဲ. နယ်ပြီး..နာရီဝက်ခန်.နှပ်ထားပါ။
နှပ်ချိန်ပြည့်ပြီဆို ဒယ်အိုးတစ်လုံးမှာ ကြက်သွန်နီကိုရွှေအိုရောင်ရသည်အထိဆီသတ်ပေးပါ။
ကြက်သွန်နီတွေရွှေအိုရောင်ရပြီဆို နှပ်ထားတဲ့ကြက်သားတွေထည့်ပြီးဆီပြန်ကာအနှစ်ကျသည်အထိအဖုံးပိတ်ပြီး ချက်ပေးပါ။
ကြက်သားတွေ တစ်ဝက်ကျက်လောက်နှုးအိပြီဆို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှီးထားတဲ့ချဉ်စော်ခါးသီးတွေကိုပေါင်းထည့်ပါ။
ကြက်သားတွေပာာချဉ်စော်ခါးသီးရဲ.အချဉ်ဓါတ်ကိုပြည့်ဝစွာစုပ်ယူရန်မီးအေးအေးမှာ(၁၅)မိနစ်ခန်. ဆက်ပြီးချက်ပေးပါ။ နောက်ဆုံး(၄) စိတ်ခွဲထားတဲ့ခရန်းချဉ်သီးတွေပေါင်းထည့်ပြီးမိမိနှစ်သက်ရာပာင်းခတ်အမွှေးကြိုင်အရွက်တစ်မျိုးမျိုးကိုအလှဆင်ပြီးသုံး ဆောင်ပါ။
၀က်ဂုတ်သားကင်( Grilled Pork Neck)**************************
ဘရန်ဒီ(သို.) ၀ီစကီ(သို.) ရမ်.၂ ဇွန်း(..........။.......)
ဇလုံကြီးကြီးတစ်ခုမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးရောစပ်ပြီး..၀က်သားများအရသာစိမ့်ဝင်အောင်..၂နာရီမှ ၄ နာရီအထိထားပေးပါ။
ပဒဲကောအမှုန်. ...................၁/၂ ဇွန်း( လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
သကြားရည်(သို.) ကြံသကာရည် ၂ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ဆန်လှော်မှုန်. .......................၁ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ငရုတ်ကြမ်းစိမ်းမှုန်. .................၁ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
တရုတ်နံနံ................... ၄ ပင်
ထောပတ်ကို အပူပေးပြီး..ကြက်ရင်ပုံသားအပြင်ကြောတွေတင်းအောင်ထောပတ်ထဲမှာ ထည့်ကြော်ပြီးစစ်ထားပါ။
ထိုလက်ကျန်ထောပတ်ထဲမှာပဲ အာလူး၊ မုန်လာဥနီ၊ ရွှေဖရုံသီးတွေကိုဆီသတ်ပေးပါ။
အနည်းငယ်လေးနွမ်းလာပြီဆိုတာနဲ.ကြက်ရင်ပုံသားကိုထည့်ပြီးရေ၁လီတာခွဲလောက်ထည့်၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းခတ်ကာ အဖုံးပိတ်ထားပါ။
နောက်ဆုံးမုန်လာဥဖြူ ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်း၊ တရုတ်နံနံတွေထည့်ပေါင်းပြီး..မီးအေးအေးမှာပဲအဖုံးပိတ်ချက်ပါ။
ကြက်ခြေထောက်/ ဘဲခြေထောက်အရေခွံသုပ်ဆိုတာအရင် ကတော့...အတော်ရှားပါးပြီး..တရုတ်ပြည်က၀င်လာတဲ့ အရေခွံခြောက်တွေသာရှိတတ်ပါတယ်..။
ဒီနေ.ဈေးကွက်အရတော့..လတ်ဆတ်တဲ့အရေခွံတွေရရှိနေပါပြီ။ မရရင်လည်းအရေခွံခြောက်ကိုရေးအေးစိမ်၊ ရေနွေးဖျောပြီး အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီ..................................၂ လုံး( ပါးပါးလှီး)
ခရမ်းချဉ်သီး..................................၂ လုံး(အစေ့ထုတ်၊ ပါးပါးလှီး)
သကြား၊ သံပုရာရည်၊ငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင်အမြစ်တွေကို တစ်ပွက်ဆူအောင်အပူပေး.. အအေးခံထားပါ။
ကြက်ခြေထောက်/ ဘဲခြေထောက်တွေကို ရေနွေးဖျောဆေးပြီး..ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ တရုတ်နံနံ ၊ ပူဒီနံတွေကိုရောပြီး..ခပ်ဖွဖွလေးနယ်ပေးပါ။
မိမိအကြိုက်အရသာကို လိုတိုးပိုလျှော့ ပြုပြင်ပါ။( နှစ်သက်ပါကစပါးလင်အဖြူရောင်အပိုင်းလေးများကို ပါးပါးလှီးထည့်နိူင်ပါသည်.)
၀က်ပေါင်သား ................၆၅ ကျပ်သား
၀က်ခေါက်..................... ၂၀ ကျပ်သား
ကြက်သွန်ဖြူ.................. ၁၅ တက်
ဆား............................၂ ဇွန်းခွဲ ( ထမင်းစားဇွန်း) သကြား.........................ဇွန်းဝက်(..........။........)
Monosodium Glutamate( အချိုမှုန်.).၁ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
ထမင်းချက်ပြီးသား...........၁ ခွက်( တရုတ်ပန်းကန်လုံး)
ငရုတ်သီးစိမ်း...................၁၀ တောင့်( ပါးပါးလှီး)
၀က်ခေါက်တွေကို ရှလကာရည်အဖြူရောင်ဖြင့် သန်.စင်နေအောင်ဆေးပြီးနှူးအောင်ပြုတ်ပေးပါ။အေးသွားလျှင်မိမိလိုအပ်တဲ့ပုံစံပါးပါးလှီးထားပါ။
ထမင်းကတော့.အနည်းငယ်စေးသော( တောင်ကြီးဆန်မျိုး) ကိုချက်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။
အပူချိန် ၃၀ ဒီဝရီ ( သာမန်အပူချိန်) မှ ၃ ရက်မှ ၅ ရက်ထားပေးလျှင်ဝက်သားချဉ်စားလို.ရပါပြီ။
နာနတ်ပွင့်( Star Anise ).......................... ၂ပွင့်
လက်သီးဆုပ်ခပ်သေးသေးအရွယ်တွေတုံးပြီး..ဆား၊ ပဲငံပြာရည်အပျစ်တို.နှင့်ရောနယ်ကာ၁၀ မိနစ်ခန်.ထားပါ။
နာနတ်ပွင့်ကိုမီးကင်ပြီးအနည်းငယ်ထုပေးပါ။ ချင်းကိုလည်းအခွံခွါ၊ ဓါးပြားရိုက်ထားပါ။
နယ်ထားတာ(၁၀) မိနစ်လောက်ကြာပြီဆိုရင်..ဒယ်အိုးတစ်လုံးမှာဆီအနည်းငယ်ကိုအပူပေးပြီးနယ်ထားတဲ့ဝက် ခြေထောက်တွေကို ၃-၄ ခုချင်းစီထည့်ပြီးရွှေညိုရောင်ရအောင်ကြော်ပြီး..ဆီစစ်ထားပါ။
( ၀က်ခြေထောက်ကိုဘာကြောင့်ကြော်ရတာလဲ ဆိုတော့..ပြုတ်တဲ့အချိန်.အရောင်လှ သလို..ဘယ်လောက်နှူးနှူး. အရိုးအသားတစ်စစီကြေမွှမသွားစေဖို.ပါ ။)
အိုးတစ်လုံးမှာကြော်ထားတဲ့ဝက်ခြေထောက်တွေကိုထည့်ပြီး..နာနတ်ပွင့်၊ချင်း၊ဆား၊ ပာင်းခတ်မှုန်.၊ သကြားတို.ထည့်ကာရေမြှုပ်ရုံလေးထည့်ပြီးစတည်ပေးပါ။
ထွက်လာတဲ့ဆီတွေနဲ.အညစ်အကြေးအားလုံးကိုခပ်ထုတ်ပါ.။( ပာင်းရည်ကြည်လင်စေရန် အတွက်ဖြစ်ပါသည်)
Posted by Alex Aung at 10:18 PM